2020 Zụta oke ọcha Tadalafil ntụ ntụ n'ịntanetị: Ihe niile ị kwesịrị ịma!
Ihe niile I Kwesịrị Aboutmara Banyere Tadalafil
/blog/tadalafil/Ihe niile I Kwesịrị Aboutmara Banyere Tadalafil
Ihe na 03 / 06 / 2018 by 阿斯劳 dere na tadalafil. O nwere 6 Comments.
1. Gịnị bụ ntụ ntụ Tadalafil?
Tadalafil uzuzu (171596-29-5) bu ndenye ọgwụ eji ede ihe di iche dika nke edere na tebụl. Ogwu a di n’ahịa n’okpuru aha ndi ozo di ka Adcirca na Cialis. Ọzọkwa, tadalafil dị n'ụdị ya. Agbanyeghị, a gwara gị ka ị jiri jikọtara tadalafil ntụ ntụ ebe ọ nwere ike enweghị ike ọgwụ mbụ; N'ihi ya, ịkwesịrị ịkpachara anya mgbe ị na-azụ ọgwụ a dịka tadalafil. Gbaa mbọ hụ na ịzụtara ụdị tadalafil ziri ezi maka nsonaazụ ka mma. Dọkịta gị ga - eduzi gị maka otu esi aga ịzụta Tadalafil ntụ dị mma.
Tadalafil (171596-29-5) a na-eji ya eme ihe n’okpuru aha iche iche iji lebara onodu ahu ike di iche iche. Dịka ọmụmaatụ, a na-ejikarị Cialis na ọgwụgwọ nke nrụrụ erectile ma ọ bụ enweghi ike n'ime ụmụ nwoke yana oke ikuku hyignrofys, nke a na-akpọkarị prostate ka ukwuu. N'aka nke ọzọ, a na-eji Adcirca, nke bụkwa akara ọzọ nke tadalafil, na-agwọ ọbara mgbali ọbara. A na - ejikwa Adcirca iji meziwanye mmega ahụ ma ụmụ nwoke ma ụmụ nwanyị na - arịa oke ọbara.
Ọ dị mma mgbe ị na-a drugụ ọgwụ a n’okpuru nduzi nke dọkịta gị ka ịzere ịnwe mmetụta dị oke njọ. N'agbanyeghị etu ị nwere ike isi banye ngwa ngwa tadalafil ntụ ewere ya na-enweghị nyocha ahụike. N ’ebe ọgwụ na-arụrụ enyi gị ọrụ, ọ bụghị akpaghị aka ga-eweta nsonaazụ dị mma n'ahụ gị. Ahụ mmadụ dị iche, ọ bụ ya mere dọkịta gị kwesịrị iji kpebie ọgwụ ị ga-eji maka ya mgbe ị nyochachara ahụike gị. Mgbe ejiri ya mee ihe ma ọ bụ zubiga ya ókè, tadalafil nwere ike ibute nsonaazụ dị oke njọ nke nwere ike ịkwụ ụgwọ iji wee gbanwee ma mgbe ụfọdụ anaghị agbanwe agbanwe.
2.Kedu ka Tadalafil ntụ si arụ ọrụ?
Tadalafil ntụ ntụ bụ otu n'ime ọgwụ nke so na klas nke ọgwụ a maara dị ka phosphodiesterase ụdị 5 inhibitors (PDE5). The theụ ọgwụ niile dị na klaasị a na-arụkwa otu ọrụ ahụ, ndị ọrụ ọgwụ na-eji ya agwọ ọrịa ihe gbasara ụdị ahụike ahụ. A na - eke ọgwụ niile n’otu dị iche iche a na - akpọ klaasị. Ndị otu a nwere ọgwụ ọgwụ nwere ihe dị otu ọhụụ ma na-arụkwa ọrụ n'otu ụzọ ahụ. Tadalafil na-enyere aka izu ike nke eriri afọ na akwara afọ, nke na-eme ka mgbaàmà hyperplasia (BPH) gị na-eto eto na-egosi; ihe mgbu ka urin, nsogbu urination na nsogbu ma ọ bụ oge ịchọrọ urin.
Ọgwụ a na - eme ka ahụ gị dị n'ọbara na-amụba n'ihe gbasara amụ, nke n'aka nke ya na-enyere aka inweta ma debe okirikiri. A na-ejikarị Tadalafil mee ihe maka ọgwụgwọ nke dysfunction erectile n'ime ụmụ nwoke, mana ọ ga - enyere gị aka ozugbo ị malitere inwe mmekọahụ. Ire ntaramahụhụ na-eme mgbe nwoke amụbara ọbara. Mgbatị ahụ mere mgbe arịa ọbara nke na-ebute mbịpụta ọbara wee mee ka ọbara dịwanye elu ma ndị enyere ọrụ iwepu ọbara na nkwekọrịta amụ. Ọ bụrụ na ọbara agbakọta na amụ gị, ọ na-ebute mgbatị. Mmụta emere egosila tadalafil kwalitere ikike nke inweta ọtụtụ ebumnuche na-adịgide adịgide maka ọtụtụ ụmụ nwoke nwere dysfunction.
Maka PAH, ọgwụ a na - eme ka arịa ọbara gị n’akpa ume iji mee ka ọbara na - erite, nke a na - emekwa ka ikike ị na - enwe mmega ahụ dịkwuo mma. Mgbe ị na-a thisụ ọgwụ a, yabụ, ị ga - enweta ike zuru oke iji rụọ ọrụ ogologo oge wee mezuo ebumnuche gị n’ime obere oge enwere ike.
3.Etu esi ewere Tadalafil ntụ ntụ?
Ndụmọdụ Medics ị kwesịrị ị na-ewere ntụgharị tadalafil ọbụlagodi nkeji 30 tupu ị tinye onwe gị n'omume mmekọahụ. Ọgwụ ga-aba uru mgbe ị na-eji ya ma ọ bụ na-enweghị nri. Shouldkwesịrị iwere tadalafil naanị mgbe ịchọrọ inwe mmekọahụ. Agbanyeghị, maka ụmụ nwoke ga-enwe mmasị inwe mmekọahụ na nzuzo karịa ugboro atọ ma ọ bụ karịa n'ime otu izu, mgbe ahụ ha nwere ike ịga maka usoro ọgwụgwọ kwa ụbọchị, nke na-abịa na usoro onunu ogwu abụọ, 2.5mg na 5mg. Usoro ọgwụgwọ akwadoro ka ị na-atụ aro kwa ụbọchị bụ 10mg, mana mgbe ezughị ezu maka gị, mgbe ahụ ọgwụ gị nwere ike ịbawanye usoro onunu ogwu gaa na 20mg. Agbanyeghị, gakwuru dọkịta gị tupu ị gbanwee usoro ọgwụgwọ iji zere mmụba nke nsogbu ntụ ntụ dị elu.
Ekwesịrị iburu Tadalafil otu oge kwa 24 awa. Mgbe ị gaghị enweta ihe dị iche iche ị tụrụ anya ya, etinyekwa usoro ogwu ọzọ n'otu ụbọchị ahụ. Ọ bụ ihe a na-ahụkarị maka ndị ọrụ tadalafil mbụ wee nweta oge igbu oge inweta nsonaazụ ndị achọrọ. Ahụ mmadụ dị iche iche, dị ka anyị kwuru na mbụ n'isiokwu a. Peoplefọdụ ndị nwere ike inweta nsonaazụ tadalafil ntụ ntụ n'ime nkeji nkeji 30 ebe ndị ọzọ ha na-enweta oge igbu oge. Agbanyeghị, ndị dọkịta na-atụ aro ka ị'sụọ ọgwụ ọgwụ ahụ ihe dị ka ụbọchị asatọ tupu i kpebie ị forụ ọgwụ dị elu ma ọ bụ nhọrọ ọgwụgwọ ọzọ.
Shouldkwesighi iji ọgwụ tadalafil ntụ ntụ were ọgwụ ọ bụla ọzọ erectile dysfunction ma ọ bụ ude. Ya mere, gwa dọkịta gị ma ọ bụrụ na ị na-a anyụ ọgwụ ọ bụla ọzọ nke ED tupu ịmalite usoro iji bulie ọgwụ tadalafil gị. Agbanyeghi enwere uzo ozo tadalafil di iche iche di na ahia, dika sildenafil, Viagra, Spedra, na Cialis, ekwesighi itinye ihe obula n'ime ha na tadalafil; ọ nwere ike ibute nsonaazụ dị egwu. Were naanị otu oge kama n'okpuru ndụmọdụ dọkịta gị. Na mgbakwunye, ọ bụrụ na ị na-a takingụ ọgwụ nitrate ọ bụla iji gwọọ nsogbu obi ma ọ bụ obi mgbu dị ka isosorbide dinitrate, nitroglycerin, isosorbide mononitrate, yana ọgwụ ntụrụndụ dị ka popup, a na-adụkwa gị ọdụ ka ị zere ya na-a tadaụ ọgwụ tadalafil. Btinye tadalafil na ọgwụ nitrate ọ bụla nwere ike ibute mbelata ọbara mgbali elu.
Iji nọrọ n'akụkụ nchebe, gwa dọkịta gị banyere ọgwụ ị na-a orụ ma ọ bụ ọ bụrụ na ị nọ n'okpuru ọgwụgwọ ọ bụla tupu ịmalite ịmalite tadalafil. Bụrụ na ị na-enwe mmega ahụ na-egbu mgbu, ma ọ bụ ihe nrụrụ ahụ na-ewe oge karịa 4 awa na-emekwa ka ị mara ọgwụ gị ozugbo. Ndakpọ ere nwere ike imebi akwara gị. Ọzọkwa, ọ bụrụ na ị nwere ihe nfụkasị maka tadalafil, echekwala ịnwe ya ma mee ka dọkịta gị mara ka ị nweta gị ụzọ ọzọ dị nchebe. Tadalafil bụ ọgwụ dị ike maka dysfunction erectile, mana ekwesịrị iji ya kpachara anya iji zere nsonaazụ dị elu. Nọgidesie ike na usoro onunu ogwu enyere maka nsonaazụ kacha mma.
4.Tadalafil uzuzu na-eji
A na-ejikarị ọgwụ tadalafil eme ihe n’ịgwọ nsogbu nsogbu ọrụ nwoke dị ka enweghi ume na arụrụala nwoke na nwanyị. Ewezuga nkwalite agụụ mmekọahụ, tadalafil na-emekwa ka ọbara gbasaa na amụ iji nyere nwoke ahụ aka inweta ma kwado nnukwu egwuregwu ogologo oge. A maara ọgwụ a maka inyere ndị nwoke aka inwe ahụmịhe nke mmekọahụ dịtere aka. Ndị ọrụ Tadalafil na-enwe ntụrụndụ siri ike na ogologo. Agbanyeghị, ekwesịrị ị theụ ọgwụ ahụ naanị otu ugboro kwa ụbọchị na nkeji 30 tupu mmekọahụ.
N'aka nke ọzọ, a na-ejikwa ntụ ntụ tadalafil na ọgwụgwọ nke mgbaàmà benign prostatic hyperplasia (BPH). Ọgwụ ahụ na-ebelata ihe mgbaàmà BPH dịka iyi na-adịghị ike, na-esiri ike ịmalite mmụba mmamịrị, yana urin ugboro ugboro, ọkachasị n'etiti abalị. N'ebe a, tadalafil na - enyere gị aka site na ịbelata eriri afọ na akwara afọ. Agbanyeghị, azụkwala ma bido iji tadalafil ntụ ntụ ọbụlagodi ma ị nwee ihe mgbaàmà BPH tupu ịnwale nyocha ahụike. Cheta ọgwụ kwesiri ka onye dọkịta kwenye ya oge niile.
Dọkịta ahụ nyekwara ndị niile nwere nsogbu ọbara mgbali elu (PAH) ntụ ntụ tadalafil. Nke a bụ ọnọdụ enwere ọbara mgbali elu n'ime arịa gị nke na-ebu ọbara na ngụgụ, nke na-edugakwawị ọgbụgbọ, mkpụmkpụ iku ume, yana ike ọgwụgwụ. Ọ na-esiri ọtụtụ ndị na-arịa ọrịa a ike ịme mmega ahụ oge niile. Agbanyeghị, ozi ọma ahụ bụ na tadalafil ntụ ntụ na-arụ ọrụ dị mkpa n'inyere ndị ọrịa PAH aka ịrụ ọrụ ha nke ọma site n'ibelata mmetụta ọnọdụ n'ahụ ahụ.
Agbanyeghị, tadalafil agaghị echebe gị pụọ n'ọrịa ndị a na-ebute site na mmekọahụ, nke gụnyere ịba ọcha n'anya B, HIV, syphilis, na gonorrhea, n'etiti ndị ọzọ. Na mkpokọta, gbaa mbọ hụ na ị nwere mmekọahụ echekwabara ma chekwaa oge niile. Ọ bụrụ na ịmaghị nke ọma etu ị ga - esi chebe onwe gị n’oge inwe mmekọ nwoke na nwoke, i nwere ike iji klọọkụ latex. Maka ama ndị ọzọ, gakwuru onye na-ere ọgwụ ma ọ bụ dọkịta gị.
5.Tadalafil ntụ ntụ
Usoro ọgwụgwọ Tadalafil nwere ike ịdị iche site n'otu onye gaa na onye ọzọ, dabere na ihe kpatara eji ya. Ọnọdụ ahụike gị na otu ahụ gị si anabata ọgwụ ahụ ga-emetụtakwa usoro ị ga-esi. Agbanyeghị, ọ bụ ihe amamihe dị na ya ịmalite site na usoro ọgwụgwọ akwadoro dị ala, nke dọkịta gị nwere ike ịbawanye ma emesịa mgbe ị tụlesịrị ọganihu ọgwụ. Ekwekwala ka a theụọ ọgwụ ị na -ekwusaghị ọgwụ gị maka na ọ nwere ike ibute nsonaazụ dị njọ ma ọ bụ mebie nsonaazụ a tụrụ anya Tadalafil ntụ ntụ bụ ndị a;
Okenye Agụụ Mmebi Dialfunction
A na-eme ogwu nwoke a iji mee ka nwa nwoke sie ike iji wee sie ike ịkwagide ma kwado ya. Usoro ọgwụgwọ akwadoro akwadoro bụ 10mg nke ekwesịrị ịbara ya otu ugboro kwa ụbọchị ma ọ bụ nkeji 30 tupu ị banye na mmekọahụ. Ọ bụrụ n’ịchọpụtaghị nsonaazụ ahụ, ị ​​ga-aga n’ihu ị usualụ ọgwụ ole ị na -eme ya ruo ụbọchị asatọ, wee gaa hụ dọkịta gị iji dozie dose ahụ. Peoplefọdụ ndị mmadụ na-enwe oge igbu oge inweta ihe nsonaazụ ya, ọkachasị mgbe ndị ọrụ tadalafil. Agbanyeghị, enwere ike ịba ụba usoro onunu ogwu rue 20mg kwa ụbọchị. Nlekọta nke usoro tadalafil ntụ ntụ sitere na 5 ruo 20mgs kwesịrị iwere otu ugboro kwa ụbọchị dịka achọrọ ma ọ bụ tupu enwe mmekọahụ. Tadalafil maka usoro onunu ED dabere na ntachi obi na nrụpụta ọrụ nkeonwe. Enwere ike belata usoro dolle ahụ maka ndị ọrụ na-enwe mmetụta dị n'akụkụ ọ bụla ọbụlagodi mgbe ha nwesịrị usoro nke 10mgs kacha ala kwa ụbọchị.
Maka iji mee ka udara tadalafil ubochi kwa ubochi mee ihe, ubara uzo mbu otu ubochi bu 2.5mg ma ekwesiri iwere ya otu ubochi obula, n’echebara oge banyere nmekorita nwoke na nwanyi. Emere usoro a maka ndị ọrụ ga-achọ inwe mmekọahụ ugboro atọ ma ọ bụ karịa kwa izu. N'ebe a, usoro ọgwụgwọ mmezi sitere na 2.5 ruo 5mgs kwa ụbọchị ma ekwesịrị ịbara ya ọnụ otu oge ọ bụla 24 awa.
Tadalafil ntụ ntụ maka Benign Prostatic Hyperplasia (BPH) na nrụrụ errect (ED))
Can nwekwara ike iburu tadalafil iji lelee ọnọdụ abụọ n'otu oge, nke nwere ike ịbụ ozi ọma maka ndị ọrụ. Maka ọgwụgwọ na-aga nke ọma nke ED na BPH, usoro a tụrụ aro ya bụ usoro ọgwụ 5mg kwa ụbọchị, nke ekwesịrị ịbara ya ọnụ n'otu oge. N'ebe a, ịkwesighi ịtụle oge agụụ mmekọahụ gị kama ịrapagidesi ike na ntuziaka usoro usoro iji mepụta nsonaazụ achọrọ. Were oge ị yourụ ọgwụ ruo mgbe dọkịta gị gwara gị ka ị kwụsịchaa mgbe ị nyochachara ọganihu ọgwụ gị.
Tadalafil ntụ ntụ Pulmonary Hypertension onunu ogwu
Maka usoro ịga nke ọma nke ọbara mgbali Pulmonary, ị ga-ewere tadalafil ntụ ntụ 40mgs otu ugboro kwa ụbọchị. Ekwesighi ka ị kee oke onodu ogwu nke 40mgs otu ubochi ma obu karighari ma obu wedata ogwu ghari.
Ọgwụ maka ọgwụ tadalafil okenye maka Benign Prostatic Hyperplasia
Maka ọgwụgwọ BPH, ịkwesịrị ị Xụ ọgwụ 5mgs ọnụ tadalafil otu ugboro kwa ụbọchị wee jide n'aka na ị na-ewere ya ihe fọrọ nke nta otu oge kwa ụbọchị maka ihe dị ka izu 26. Dọkịta gị nwekwara ike ịbawanye ma ọ bụ belata usoro ị ga-eme kwa ụbọchị dabere na ahụ gị ga-esi emeghachi omume maka usoro izu maka izu ole na ole mbụ. Bụrụ na nsonaazụ ọ bụla dị elu ọ bụla nwere ike ịkpọtụrụ dọkịta gị n'oge tupu ọnọdụ ahụ aka njọ.
6.Tadalafil ntụ ntụ ọkara ndụ
Tadalafil uzuzu ọkara ndụ ga na-arụ ọrụ n'ahụ gị ruo ihe dịka 36 awa mgbe ị sụsịrị ya. Nke ahụ na-eme tadalafil nhọrọ dị oke mma maka ọtụtụ ndị ọrụ na-achọ imezi ahụmịzụ mmekọahụ ha. Doseakingụ ọgwụ tadalafil ntụ ntụ kwa ụbọchị ga-enyere gị aka inweta firmer na ere dị ogologo mgbe ị theụsịrị usoro ahụ ihe dị ka ụbọchị atọ ruo ise nke iji mbụ. Maka ụmụ nwoke anaghị azaghachi nke ọma n'ihe a na-achọkarị iji ọgwụ dị elu, ị tadaụ ọgwụ tadalafil kwa ụbọchị ga-aba uru nke ukwuu. Ssụ ọgwụ kwa ụbọchị dị mma n'ịnye ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọganihu dị ukwuu na njikwa mmekọahụ gị.
Ọ bụ ihe amamihe dị na ya mgbe niile ka ị tadaụọ ọgwụ ntụgharị ọgwụ tadalafil otu ugboro kwa ụbọchị ma ọ bụrụ na ị nwetaghị nsonaazụ ahụ, wereghị usoro ọzọ n'ime awa 24. Nsonaazụ ntụ ntụ Tadalafil nwere ike gbuo oge maka ụfọdụ ndị ọrụ, mana nke ahụ apụtaghị na ị ga-anara mgbakwunye otu ọgwụ kwa ụbọchị. Ndị ọrụ ntụ ntụ nke oge mbụ nwere ike ịnwe ụfọdụ igbu oge, ma ka oge na-aga, ha ga-enweta oke egwu achọrọ.
7.Mmetụta Tadalafil ntụ ntụ
Dika tadalafil ntụ ntụ bụ ọgwụ nwere ike nke na-enyere ndị mmadụ aka n'ịgwọ ọnọdụ ahụike dị iche iche, ọ bụrụ na ejiri ya ma ọ bụ ịdoụbiga ihe ókè nwere ike itinye gị ụfọdụ nsogbu. Otutu ndi tadalafil ntụ ntụ mmetụta bụ n'ihi ịuseụbiga ọrụ ókè na ahụ ahụ gị si anabata ọgwụ. Ọtụtụ mgbe, ụfọdụ ndị nwere ike ha agaghị enweta uru dị n'ọgwụ ahụ ọbụlagodi mgbe ha sụsịrị ọgwụ ọ bụla. Usersfọdụ ndị ọrụ nwekwara ike ịnwe mmetụta dị ala karịa ndị ọzọ. Effectsfọdụ nsonaazụ tadalafil na-adịkarị nwere ike wepu oge na oge, ha bụ ndị a;
Isi ọwụwa bụ ihe a na-ahụkarị ka ị na-a yourụ ọgwụ ntụgharị tadalafil. Might nwekwara ike ịnwe obi mgbawa, mgbu, ọgbụgbọ, mmiri iwe, afọ ọsịsa, na ụkwara. Ihe mgbu dị n’azụ gị, afọ gị, ụkwụ gị ma ọ bụ ogwe aka gị dịkwa ọtụtụ ndị ọrụ tadalafil uru. Dịka ekwuru, mmetụta ndị a ga-akwụsị mgbe obere oge gasịrị, mana ọ bụrụ na ha ga-anọ ogologo oge karịa ka ha tụrụ anya ịgwa gị dọkịta gị iji nyere gị aka ịgwọta ya. Ozi ọma ahụ bụ na ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na enwere ike ịchịkwa nsonaazụ ndị ọzọ tadalafil.
Enwekwara ụfọdụ mmetụta ọjọọ dị njọ na ị kwesịrị ịchọrọ nlekọta ahụike ozugbo ị malitere ịhụ ha, ha gụnyere;
Ọnwụ nke ọhụụ ma ọ bụ nke na-enye ọhụụ mgbe ị na-ewere tadalafil. Usersfọdụ ndị ọrụ nwere ike ịmalite ịnwe ihe isi ike na ọhụụ ha ozugbo ha malitere ị thisụ ọgwụ a, ma ozugbo ọ mere, kpọọ dọkịta gị n'ime obere obere oge enwere ike.
Mgbanwe ọ bụla n’ọhụụ na-ahụ agba ka ekwesịrị ịgwa ụlọ ọgwụ ọgwụ dị nso ma ọ bụ ọgwụ gị. Usersfọdụ ndị ọrụ nwere ike ịmalite ihe isi ike na ịkọwapụta agba ụfọdụ, dị ka ịkọwa ọdịiche dị n’etiti akwụkwọ ndụ na acha anụnụ anụnụ.
Nsogbu ịnụ ntị, ịda ntị na ntị, mfu, na mbelata nke ịnụ ihe bụ ihe ọzọ na - emebi ọghọm nke mmadụ nwere ike inwe.
Ego agbagoro agbagoro ogologo oge nke na-adịgide karịa 4 awa.
Chest mgbu na okpukpo okpukpo, anụ ahụ na-acha ma ọ bụ na-emegharị ahụ, ihe ọkụ ọkụ, ire nke ire, anya, egbugbere ọnụ, na ihu.
Ekwesịrị ilebara nsogbu siri ike na ilo mmiri ma ọ bụ iku ume ozugbo.
Ọ bụrụ na ịkọrọ dọkịta gị banyere nsogbu ndị a dị n'elu nwere ike ibute ọnọdụ ndị a na-atụgharịghị na mgbe ụfọdụ, ọ nwere ike ịkpata ọnwụ. Egbula oge ịkpọtụrụ ndị ọkachamara n'ịgwọ ọrịa ma ọ bụrụ na ị na-enwe mmetụta ọ bụla. N’otu aka ahụ, esila n’iji usoro ị nweta ahụ na-akọghị ọgwụ gị n’ihi na ọ nwere ike ibute nsogbu karịa ma ọ bụ mee ka ọnọdụ gị ka njọ. Nsonaazụ niile nke tadalafil bụ ihe a na - achịkwaghị achịkwa, dọkịta gị ga - adụ gị ọdụ otu a ka ị nyochachara ọnọdụ gị.
8.Tadalafil uzuzu maka ire ere
Tadalafil uzuzu n'ihi na ire dị na ahịa ma ụlọ ahịa dị n'ịntanetị ma ọ bụ ụlọ ahịa anụ ahụ. Agbanyeghị, ịnwere ike ịchọta ya n'okpuru aha akara dị iche iche dị ka Cialis ma ọ bụ Adcirca, dabere na ọnọdụ gị. Nke a bụ ọgwụ ọgwụ iwu n'ọtụtụ ikike, ịgaghị enwe ụjọ ọ bụla mgbe ịnwere, ịzụta, ma ọ bụ mbubata ọgwụ ahụ. Na United States of America, Tadalafil kwadoro izizi na 2003 maka ọgwụgwọ dysfunction erectile, na ọtụtụ afọ ọ gosipụtara na ọ dị irè. A na-ahụ ntụ ntụ tadalafil dị na gram dị iche iche dabere na ego ịchọrọ ịgwọ ọnọdụ gị.
I nweere onwe gị ịzụta tadalafil ntụ ntụ na nnukwu ma ọ bụ zuo ezu maka ojiji otu ụbọchị ma ọ bụ ụbọchị ole na ole dabere na ndụmọdụ dọkịta gị. Enwere ọtụtụ ndị na-eweta ntụ ntụ na-eweta ihe n’ahịa taa, mana gbaa mbọ hụ na ị nwetara ya n’aka onye na-azụ ahịa na onye na-ere ahịa a ma ama. Ọ bụghị ndị niile na-ere ahịa ị hụrụ n’ahịa nwere ọgwụ dị mma. Cheta, maka ezigbo nsonaazụ; ịkwesịrị iji ntụ ntụ tadalafil dị mma mgbe niile. Enwekwara ụdị jenerato nke tadalafil ntụ ntụ, nke nwere ike enweghị ụfọdụ agwa ma ghara inwe ike ịgwọ gị ọria.
Bụrụ na ị maghị banyere ebe ma ọ bụ otu esi enweta ogo tadalafil ntụ, mgbe ahụ atụla ụjọ ịgwa dọkịta gị. Ndị ọkachamara n’ịgwọ ọrịa bụ ndị kacha gosi mmadụ ebe ị ga-enweta ọgwụ ọ ga-edenye gị. Agbanyeghị, ọ dị mma mgbe niile ịme nyocha gị iji mata ndị na-emepụta tadalafil ntụ ntụ kachasị mma na ndị na-eweta ihe gbara gị gburugburu. Gbalịsie ike ịzụta ezigbo tadalafil ntụ ntụ nke ga-eme ka ọ dịrị gị mfe ịchekwa ya ka ị na-aga n'ihu na usoro onunu ogwu gị.
9.Ebee ka ịzụta Tadalafil ntụ ntụ?
Worldwa na-agbanwe, n’adịghịkwa ka ụbọchị ụfọdụ azụ, ị nwere ike ịzụta tadalafil uzuzu n'ịntanetị na weebụsaịtị anyị ma nweta ngwaahịa gị n'ime ntakịrị ntakịrị oge enwere ike. Nwere ike ịbanye na saịtị anyị site na ama ama gị, mbadamba, ma ọ bụ laptọọpụ ma mee iwu gị na nkasi obi nke ụlọ ma ọ bụ ọfịs gị. N'aka nke ọzọ, ị ka nwere ike nweta ọgwụ tadalafil site na ụlọ ahịa ọgwụ mpaghara. Agbanyeghị, anyị na-adụ ndị ahịa anyị ọdụ ka ha kpachara anya mgbe ha na - achọ ndị na - eweta tadalafil ntụ ntụ kacha mma n'ịntanetị ma ọ bụ nke anụ ahụ. Offọdụ ndị na-ere ọgwụ ọjọọ nwere ike ịchekwa ngwaahịa dị ala nke na-agaghị ewepụta nsonaazụ ndị achọrọ ma ọ bụ n'ikpeazụ ikpughere gị mmetụta ọjọọ.
Mee nyocha gị banyere ụlọ ọrụ ị na-achọ ịzụta tadalafil ntụ ntụ iji ghọta otu esi arụ ọrụ. Thezọ kachasị mma bụ ilele ọkwa ụlọ ọrụ na nyocha ndị ahịa. Companylọ ọrụ a na-akwanyere ùgwù ga-enwe nzaghachi dị mma na ogo dị mma. Guo ihe di iche iche onye ahia gi ma mee mkpebi doro anya. Onye ahịa na-enwe obi ụtọ ga na-agwa ndị ahịa ndị ọzọ mgbe niile na onye na-ebubata ya, ndị ahụ na-emechu ihu agaghị atụ egwu iji gosipụta mmechuihu ha. Emela ihe ọsọ ọsọ mgbe ị na-azụ ntụ tadalafil, were oge gị, ma mụọ ndị na-ebunye ya yana ndị nrụpụta dị na ahịa. Dọkịta gị nwekwara ike inyere gị aka ịchọpụta onye na-ere ere tadalafil kacha mma gburugburu.
Anyị bụ ndị isi tadalafil ntụ ntụ soplaya anyị nọ na mpaghara a, anyị anọwokwa n'ihu egwuregwu ahụ ruo ọtụtụ afọ ugbu a. Anyị na-enye ndị ahịa anyị ngwaahịa ọgwụ niile dị mma yana ị na-ebuga ndị bịara ya n'oge niile. Weebụsaịtị anyị nwere ngwa ịnabata ndị mmadụ, ị na-enye gị ohere ịme iwu gị n'ime sekọnd na ebe ọ bụla. Nwere ike ịmegharị ngwa ngwa site n’otu ngwaahịa gaa na nke ọzọ na weebụsaịtị anyị. Ngwa ahịa anyị, dị ka tadalafil ntụ juru eju iji zere mmerụ ọ bụla mgbe ị na-ebugharị ma na-emekwa ka ọ dịrị gị mfe ịchekwa ọgwụ. Agbanyeghị, anyị na-adụ ndị ahịa anyị niile na-eguzosi ike n'ihe ọdụ, ka ha ghara ị takingụ ọgwụ anyị n'emeghị nyocha ahụike ma nweta ọgwụ kwesịrị ekwesị n'aka ndị ọrụ ọgwụ.
Maka ajụjụ ma ọ bụ nchegbu niile gbasara tadalafil ntụ ntụ, ị nweere onwe gị ịkpọtụrụ anyị n'oge ọ bụla. Tebụl nlekọta ahịa anyị nwere ike idozi nsogbu gị niile ma nyere gị aka ịme iwu na nyiwe anyị. Debe ntụ ntụ na ụmụaka ma were usoro ọgwụgwọ a tụrụ aro ya maka nsonaazụ kacha mma. Ọ bụrụ na ị na-enwetụ mmetụta ọ bụla na-adịghị mma, gwa dọkịta gị maka ndụmọdụ na nduzi ọzọ.
10.Tadalafil ntụ ntụ vs Sildenafil Citrate ntụ ntụ
Ọgwụ abụọ a dị na phosphodiesterase-5 (PDE5), nke ahụ pụtara na ọ fọrọ obere ka ha rụọ ọrụ n'otu ụzọ ahụ. A na-ahụkarị tadalafil ntụ na sildenafil citrate powder, ha na-agwọkwa adịghị ike na nrụrụ nwoke. Agbanyeghị, ọgwụ abụọ ahụ nwere ike ịdị irè mgbe onye ọrụ kpaliri. Mgbe ị na-agbaso ntuziaka ị doụ ọgwụ niile, tadalafilil na sildenafil citrate ntụ ntụ nwere ike inyere gị aka iru ngwa ngwa.
N'ihe banyere arụmọrụ, tadalafil ntụ ntụ na-arụ ọrụ n'ime oge 16 ruo 45 mgbe ị sụsịrị ya. N'aka nke ozo, sildenafil na-eweputa nsonaazụ n'ime nkeji 30, ma mgbe ị na-eri nri oke abụba, ọ nwere ike imetụta arụmọrụ ọgwụ. Ya mere, ekwesiri iburu sildenafil citrate ntụ na afọ efu maka nsonaazụ ka mma. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe niile PDE5 na-egbochi arụmọrụ yiri. Agbanyeghị, n'agbanyeghị ịdị ike sildenafil na-eguzo na 84% na tadalafil na 81%, ọtụtụ ụmụ nwoke na-ahọrọ iwelata ntụ ntụ n'ihi na ọ nwere mmetụta ogologo oge karịa.
Enwere ike ịme ntụ ntụ Tadalafil mgbe achọrọ ya ma ọ bụ kwa ụbọchị. Na -emekarị, usoro tadalafil kwa ụbọchị dị ntakịrị karịa oge achọrọ. Dịka ọmụmaatụ, 10mgs bụ usoro mmalite tadalafil tupu ịmalite inwe mmekọahụ. Ozugbo emere, mmetụta ahụ ga-adịru ihe dịka 36 awa. Dọkịta gị nwekwara ike ịbawanye usoro onunu ogwu ya na 20mg ma ọ bụ belata ya na 5mg mgbe mmetụta nke ọgaghị adabaghị. Maka usoro ubochi kwa ubochi, usoro ọgwụgwọ nke akwadoro tadalafil ntụ ntụ a tụrụ aro bụ 2.5mg maka ED na 50mg mgbe ị na-agwọ BPH. A na-adụ ndị ọrụ ọdụ ka ọ ghara ịbawanye usoro ọgwụ tadalafil na-enweghị ndụmọdụ dọkịta iji belata nsonaazụ.
E kwesịrị iwere Sildenafil citrate ntụ ntụ otu ugboro kwa ụbọchị na otu awa tupu ịbanye onwe gị na mmekọahụ. Ekwesịrị ị drugụ ọgwụ ahụ dabere na mkpa, yana usoro a tụrụ aro bụ 50mgs, nke ị nwekwara ike were nkeji 30 ma ọ bụ awa anọ tupu enwe mmekọahụ. N'ọnọdụ ụfọdụ, enwere ike ịbawanye sildenafil citrate ntụ ntụ ntụ na 100mgs ma ọ bụrụ na usoro 50mg adapụtaghị nsonaazụ achọrọ. Dọkịta gị nwekwara ike belata usoro onunu ogwu nye 25mgs ma ọ bụrụ na ị na-enwe mmetụta mmerụ ahụ na-enweghị ike. Dị ka tadalafil, ekwesịrị ịkpụ sildenafil citrate ntụ ntụ otu ugboro kwa ụbọchị ọbụlagodi na ị gaghị enweta nsonaazụ ahụ n'ime awa 4.
Ọgwụ abụọ ahụ, mgbe a sedụchara ma ọ bụ jiri ya mee ihe n'ụzọ na-adịghị mma, nwere ike ibute nsonaazụ ndị ọzọ yiri mmịpụta, isi ọwụwa, na afọ mgbu. Ma, a na-ejikọta nghọta karịa agba na sildenafil citrate ntụ ntụ. Ozi ọma ahụ bụ na enwere ike ịchịkwa nsonaazụ ọgwụ abụọ ahụ ma ọ bụrụ na ịchọrọ nlekọta ahụike ozugbo. Nwere onwe gị ịgakwuru dọkịta gị ma ọ bụ onye na-ere ọgwụ maka ozi ndị ọzọ gbasara tadalafil uzuzu na sildenafil citrate ntụ ntụ.
Kukreja, RC, Salloum, FN, Das, A., Koka, S., Ockaili, RA, & Xi, L. (2011). Ojiji ohuru nke phosphodiesterase-5 na-egbochi oria obi. Nlere & Clinical Cardiology, 16(4), e30.
Mostafa, ME, Senbel, AM, & Mostafa, T. (2013). Mmetụta nke adịghị ike adịghị ala ala tadalafil na anụ ahụ akwara cavernous na oke oke mamịrị. Urology, 81(6), 1253-1260.
Kaya, B., Çerkez, C., Işılgan, SE, Göktürk, H., Yığman, Z., Serel, S.,… & Ergün, H. (2015). Tụnyere mmetụta nke sistemụ sildenafil, tadalafil, na vardenafil na -arụ na mkpụkọ anụ ahụ na oke. Journal nke ịwa ahụ plastic na ịwa ahụ aka, 49(6), 358-362.
Porst, H., Roehrborn, CG, Secrest, RJ, Esler, A., & Viktrup, L. (2013). Mmetụta nke tadalafil na ọrịa mgbapụta nke urinary dị ala na hyperplasia benign na nrụrụ erectile na ụmụ nwoke na-enwe mmekọahụ na ọnọdụ abụọ: nyocha nke ịda ogbenye data site n'ọmụmụ nyocha anọ na-achịkwa tadalafil. Akwụkwọ akụkọ banyere ịgwọ ọrịa, 10(8), 2044-2052.
Ajụjụ 6 jụọ onwe gị n'ihu gị cialis ntụle nyocha
Cialis: Otu esi eji ya na oge ole ọ na-aga
Ihe gbasara 5 kachasị elu banyere nchọpụta Cialis
Dr. Patrick Young10 / 07 / 2018 na 8: 18 pm
ga-10 / 02 / 2018 na 7: 55 am
Ndewo m ga-achọ ịmara ọnụahịa maka gram ntụpọ tadalafil, ekele gị.
Dr. Patrick Young06 / 21 / 2018 na 8: 55 pm
Kedu ihe ị pụtara, aghọtaghị m. Kedu ka anyị ga-esi kpọtụrụ e-mail? My email bụ [Email na-echebe]
Brandon06 / 21 / 2018 na 4: 55 pm
Enweghị ọnụ ahịa maka ndị steroid niile biko?
Dr. Patrick Young06 / 14 / 2018 na 4: 19 am
E zigalarị ahịa ahịa na ngwaahịa na igbe ozi igbe. Biko mara nke ahụ
Dr.Bhupinder Singh06 / 14 / 2018 na 3: 25 am
Anyị chọrọ 500 gm. tadalafil uzuzu, gwa ego na ego iji tinye na akaụntụ gi.
Kedu ihe bụ Super Cardarine? / 8 Benefits Of Cardarine	Kedu ihe methenolone enanthate ntụ ntụ mere?